Chirikadzi yeZarefati Yakapiwa Mubayiro Nokuti Yaiva Nokutenda |
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
IMWE chirikadzi inotambura inombundira mwanakomana wayo zai regondo. Inofunga kuti iri kurota. Munguva pfupi yapfuura, yange yakagumbatira mwanakomana wayo anga afa. Iye zvino mukadzi wacho haasi kubatika nemufaro paanotarisa mwanakomana wake amutswa uyo ari kunyemwerera. Muenzi wake anoti “Ona, mwanakomana wako mupenyu.”
Kumutswa ikoko kunoshamisa kwakaitika makore anenge 3 000 akapfuura. Unogona kuverenga nezvenyaya iyi muna 1 Madzimambo chitsauko 17. Muenzi wacho muprofita waMwari anonzi Eriya. Asi amai vemwanakomana ndiani? Ndeimwe chirikadzi isingataurwi nezita inogara mutaundi reZarefati. Kumutswa kwakaitwa mwanakomana waamai ava ndechimwe chezviitiko zvakanyatsosimbisa kutenda kwavo. Sezvatinokurukura nezvechirikadzi iyi, tichawana zvidzidzo zvinokosha.
ERIYA ANOONA CHIRIKADZI INE KUTENDA
Jehovha ainge ataura kuti mvura yaizotora nguva yakareba isina kunaya muumambo hwaAhabhi, mambo akaipa waIsraeri. Eriya paakataura nezvekusanaya kwemvura, Mwari akaita kuti avande Ahabhi uye akaita chishamiso chokuti makunguo amuunzire chingwa nenyama. Jehovha akabva audza Eriya kuti: “Simuka, enda kuZarefati, reSidhoni, ugare ikoko. Tarira! Ndicharayira mumwe mukadzi ari ikoko, chirikadzi, kuti akupe zvokudya.”—1 Madz. 17:1-9.
Eriya paakasvika kuZarefati, akaona imwe chirikadzi yaiva murombo ichitsvaga huni. Kuti ingadaro iri iyo yaizopa muprofita uyu zvokudya here? Yaizozviita sei iyo iri murombo? Pasinei nokunetseka kungave kwaiita Eriya, akatanga kukurukura nechirikadzi yacho. Akati, “Ndapota, ndiunzirewo mvura shomanana mumudziyo kuti ndinwe.” Payaienda kunomutorera mvura, Eriya akabva awedzera kuti: “Ndapota, ndiunzirewo chimedu chechingwa.” (1 Madz. 17: 10, 11) Kupa muenzi uyu mvura kwaiva nyore, asi kuzomupa chingwa kwainge kwakaoma.
Chirikadzi yacho yakati: “NaJehovha Mwari wenyu mupenyu, handina keke reraundi, asi tsama yefurawa iri muchirongo chikuru nemafuta mashomanana ari muchirongo chiduku; uye tarirai ndiri kuunganidza huni shomanana, uye ndichaenda ndozvigadzirira ini nomwanakomana wangu chimwe chinhu, todya, tofa.” (1 Madz. 17:12) Kukurukurirana kwakaita Eriya nechirikadzi iyi kunotidzidzisei?
Chirikadzi iyi yakaziva kuti Eriya aiva muIsraeri aitya Mwari. Izvi zvinoratidzwa nemashoko ayo okuti “naJehovha Mwari wenyu mupenyu.” Zvinoita sokuti kunyange zvazvo yaiti zivei nezvaMwari wevaIsraeri, yakanga isingamuzivi zvokutozosvika pakumuti “Mwari wangu.” Yaigara mutaundi reZarefati, raiva muSidhoni kana kuti raiva pasi peSidhoni iyo yaiva muFenikiya. MuZarefati munofanira kunge maigara vanamati vaBhaari. Asi Jehovha ane chimwe chinhu chakanaka chaakaona pachirikadzi iyi.
Kunyange zvazvo chirikadzi yeZarefati yaigara nevanhu vainamata zvidhori, yakaratidza kuti yaiva nokutenda. Jehovha akatuma Eriya kuchirikadzi iyi kuti aibatsire uye kuti iye azvidzivirirewo. Izvi zvinogona kutipa chidzidzo chinokosha.
Havasi vose vaigara muZarefati umo mainamatwa Bhaari vainge vakanyanya kuipa. Kutumwa kwakaitwa Eriya kuchirikadzi iyi kunoratidza kuti Jehovha anofunga nezvevanhu vane mwoyo yakanaka vasati vava kumushumira. Zvechokwadi “murudzi rwose munhu anomutya [Mwari] uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.”—Mab. 10:35.
Mundima yenyu mune vanhu vakawanda sei vakaita sechirikadzi yeZarefati? Kunyange zvazvo vangave vachigara nevanhu vari muchitendero chenhema, vangada kunzwa mashoko akanaka. Vangava nezvishoma zvavanoziva nezvaJehovha kana kuti vangasatombomuziva saka vanotoda kubatsirwa kuti vagamuchire kunamata kwakachena. Uri kutsvaka uye uri kubatsira vanhu vakadaro here?
“IMBOTANGA WANDIGADZIRIRA KEKE DUKU RERAUNDI”
Chimbonyatsofungisisa zvakakumbirwa chirikadzi naEriya. Mukadzi uyu akanga achangobva kuudza Eriya kuti iye nemwanakomana wake vaizozvigadzirira zvokudya zvokupedzisira vodya vofa. Asi Eriya akati chii? “Usatya. Enda uite sezvawataura. Imbotanga wandigadzirira keke duku reraundi nezviripo, uuye naro kwandiri, wozozvigadzirira iwe nomwanakomana wako chimwe chinhu. Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Furawa iri muchirongo chikuru haizoperi, uye mafuta ari muchirongo chiduku haazoperi kusvikira pazuva richanayiswa mvura zhinji panyika naJehovha.’”—1 Madz. 17:11-14.
Vamwe vangadaro vakati, ‘Hazviiti kuti tipe munhu zvokudya zvedu zvokupedzisira.’ Asi izvozvo handizvo zvakataurwa nechirikadzi. Kunyange zvazvo yaiziva zvishoma nezvaJehovha, yakaratidza kutenda ikaita zvayakakumbirwa naEriya. Chokwadi uyu waiva mukana wokuti chirikadzi yacho iratidze kutenda uye yakaita chisarudzo chakanaka!
Kutenda kwakaita chirikadzi muna Mwari waEriya, Jehovha, kwakaiponesa pamwe nemwanakomana wayo
Mwari haana kusiya chirikadzi iyoyo yaitambura. Sezvakanga zvavimbiswa naEriya, Jehovha akawedzera zvokudya zvayo zvikararamisa Eriya, chirikadzi yacho nemwanakomana wayo kusvikira mvura yanaya. Chokwadi, “furawa yaiva muchirongo chikuru haina kupera, nemafuta aiva muchirongo chiduku haana kupera, sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Eriya.” (1 Madz. 17:16; 18:1) Kudai chirikadzi iyoyo isina kuita zvayakakumbirwa naEriya, keke duku reraundi rayakagadzira netufurawa twayo netumafuta ringadai rakava zvokudya zvayo zvokupedzisira. Asi yakaratidza kutenda ikavimba naJehovha ikatanga yapa Eriya zvokudya.
Tinowana chidzidzo chokuti Mwari anokomborera vaya vanotenda maari. Paunosangana nemuedzo ungangokanganisa kuperera kwako kuna Mwari uye woratidza kutenda, Jehovha achakubatsira. Achakupa zvaunoda pakurarama, achakudzivirira uye acharatidza kuti iShamwari yako uye izvi zvichakubatsira kuti ukunde muedzo wacho.—Eks. 3:13-15.
Muna 1898, Zion’s Watch Tower yakataura kuti nyaya yechirikadzi iyi inotipa chidzidzo ichi: “Kana mukadzi wacho aizoratidza kutenda oita zvaakaudzwa, Tenzi aizomubatsira achishandisa Muprofita; asi kudai asina kuratidza kutenda, zvimwe paizotsvakwa imwewo chirikadzi. Ndozvazvakaitawo nesu, murwendo rwedu rwoupenyu tinosvika pokuti Tenzi anotiedza kuti aone kuti kutenda kwedu kwakadii. Kana tikaratidza kutenda tichakomborerwa; asi tikasadaro, hatikomborerwi.”
Kana tikasangana nemiedzo, tinofanira kutsvaka kutungamirirwa naMwari tichishandisa Magwaro uye mabhuku edu anotaura nezveBhaibheri. Zvadaro tinofanira kuita zvinodiwa naJehovha pasinei nokuti tingaomerwa sei nokuzviita. Chokwadi tichakomborerwa kana tikaita zvinotaurwa nechirevo ichi chouchenjeri: “Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kuvimba nokunzwisisa kwako. Funga nezvake munzira dzako dzose, uye iye acharuramisa makwara ako.”—Zvir. 3:5, 6.
‘MAKAUYA KUTI MUURAYE MWANAKOMANA WANGU HERE?’
Chirikadzi iyi yakanga yava kuzosangana nemumwe muedzo zvakare. Bhaibheri rinoti: “Pashure pezvinhu izvi mwanakomana womukadzi wacho, tenzikadzi weimba yacho, akarwara, kurwara kwake kukanyanya kwazvo zvokuti akaguma kufema.” Vachitsvaka kuti nei vakanga vawirwa nedambudziko iri, amai vomwana uyu vakati kuna Eriya: “Ndinei nemi, haiwa imi munhu waMwari wechokwadi? Makauya kwandiri kuti kukanganisa kwangu kuyeukwe uye kuti muuraye mwanakomana wangu.” (1 Madz. 17:17, 18) Mashoko iwayo okurwadziwa anoratidzei?
Kuti chirikadzi yacho yainetseka here nechivi chayainge yakaita? Kuti ingava yakafunga kuti kufa kwemwanakomana wayo kwaiva kurangwa naMwari uye kuti Eriya akanga atumwa naMwari kuti azomuuraya here? Bhaibheri harina zvarinotaura, asi chatinoziva ndechokuti chirikadzi yacho haina kupomera Mwari kuti anoita zvakaipa.
Eriya anofanira kunge akanetseka chaizvo nokufa kwemwanakomana wechirikadzi uye zvayakataura zvokuti kufa kwemwanakomana wayo kwakakonzerwa nomuprofita uyu. Eriya akatora mutumbi wacho akaenda nawo kuimba yepamusoro, akashevedzera achiti: “Haiwa Jehovha Mwari wangu, mungaunzawo chinhu chinokuvadza pachirikadzi yandiri kugara nayo ndiri mutorwa nokuuraya mwanakomana wayo here?” Eriya akanetseka kuti zita raMwari raizozvidzwa kana aizorega mukadzi uyu aiva nemutsa uye aigamuchira vaeni zvakanaka achiramba achitambura. Saka akateterera achiti: “Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndapota, dzosai mweya womwana uyu maari.”—1 Madz. 17:20, 21.
“ONA, MWANAKOMANA WAKO MUPENYU”
Jehovha akanga akateerera. Chirikadzi iyi yakanga yapa zvokudya muprofita waJehovha uye yakanga yaratidza kutenda. Zvinoita sokuti Mwari akabvumira kuti urwere hwomwanakomana uyu humuuraye achiziva kuti aizomumutsa uye kumutswa kwake ndiko kwokutanga kwakanyorwa muMagwaro uye kwaizoita kuti zvizvarwa zvaizotevera zvive netariro. Jehovha akamutsa mwana uyu Eriya paakateterera kwaari. Funga kuti chirikadzi yacho yakafara sei Eriya paakati: “Ona, mwanakomana wako mupenyu”! Chirikadzi yacho yakabva yaudza Eriya kuti: “Chokwadi, zvino ndava kuziva kuti muri munhu waMwari uye kuti shoko raJehovha riri mumuromo menyu nderechokwadi.”—1 Madz. 17:22-24.
Nyaya yechirikadzi iyi ndipo painoperera. Zvisinei, kutaura zvakanaka kwakaita Jesu nezvechirikadzi iyi kunoratidza kuti inenge yakazova mushumiri akatendeka waJehovha kwoupenyu hwose. (Ruka 4:25, 26) Nyaya yechirikadzi iyi inotidzidzisa kuti Mwari anokomborera vaya vanoitira zvakanaka vashumiri vake. (Mat. 25:34-40) Inoratidza kuti Mwari anotarisira vashumiri vake vakatendeka kunyange pavanenge vari mumamiriro ezvinhu akaoma. (Mat. 6:25-34) Nyaya iyi inopawo uchapupu hwokuti Jehovha anoda uye anokwanisa kumutsa vakafa. (Mab. 24:15) Chokwadi tine zvikonzero zvakazonaka zvokuti tiyeuke chirikadzi yeZarefati.